Nri Ugbo Kildare Mepere Ugbo & Ahịa - IntoKildare
Foodlọ Ọrụ Ugbo Kildare Open Farm & Shoplọ ahịa, ugbo ezinụlọ nke ọgbọ nke atọ, dị naanị nkeji ole na ole site na obodo Kildare. Enweghị ụgwọ ọ bụla na Open Farm, na -enye ndị ọbịa ezinaụlọ enyi, ebe a na -adọkpụ na oche nkwagharị ebe ha nwere ike ịhụ anụmanụ dị iche iche na ọnọdụ ebumpụta ụwa.
Ugbo ahụ bụ ebe ọtụtụ anụmanụ nwere omume enyi na -atọ ụtọ gụnyere; Kamel, Ostrich, Emu, Ezi, Ewu, Ehi, Mgbada & Atụrụ. Gbaa ụgbọ oloko Indian Express gburugburu ugbo wee nụ akụkọ kacha ọhụrụ gbasara anụmanụ.
Gaa na ebe a na -ere anụ na ebe a na -ere anụ, na -egwu okirikiri Golf Crazy n'ime Indian Creek ma ọ bụ gaa na ụlọ ọrụ Teddy Bear, maka ntinye akwụkwọ ntanetị biko gaa na webụsaịtị, kildarefarmfoods.com. A na -akwadokwa mmemme mmemme dị ka Santa na saịtị, biko lee Kildare Farm Foods social media na webụsaịtị maka nkọwa.
Café Tractor na -enye menu nri ezinụlọ dị ụtọ, yabụ ma nri ụtụtụ ya, nri ehihie ya ma ọ bụ naanị kọfị na achịcha na -atọ ụtọ agaghị emechu gị ihu.
Ụlọ ahịa ugbo bụ ọkacha mmasị nke ndị ọbịa, na -ere ọtụtụ ụdị nri ọhụrụ na oyi kpọnwụrụ nke nhọrọ nnwale na achịcha na -atọ ụtọ. Ịgagharị site na ya na -atọ ụtọ mgbe niile na ọnọdụ enyi na enyi nke ezinụlọ.
Budata ngwa efu maka akụkọ, ọpụrụiche na mmelite, chọọ 'Kildare Farm Foods' na ngwa ma ọ bụ ụlọ ahịa Google Play.
Outdoors, Ịzụ ahịa, Nwee ezumike ezinụlọ, Nature & Anụ ọhịa, Ihe Nwere Ike Ime, Ihe Zoro Ezo, Cafes, Kildare
Duneany, Obodo Kildare, Ireland.
Mọnde ruo Fraịdee: 9am ruo 5pm
Emechiri Sọnde & Ememe Ọha